Tag: go'aanka iibsiga macaamiisha | Martech Zone
Tag: go'aanka iibsiga macaamiisha
Axad, Sebtembar 27, 2015 Khamiista, Noofembar 5, 2015 Douglas Karr
Waxaan qorey oo aan inbadan kahadleynay qeexida iyo go aanka iibsiga maadama ay laxiriirto wax soo saar. Aqoonsiga calaamaddu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa; laga yaabaa in ka badan intaad moodeyso! Markaad sii waddo inaad ku dhisto wacyigaaga astaantaada shabakadda, maskaxda ku hay in - halka ay ka kooban tahay isla markiiba aysan u horseedi karin beddelaad - waxay u horseedi kartaa aqoonsi sumcad. Markuu joogitaankaagu sii kordho oo sumaddaadu noqoto il kheyraad lagu kalsoon yahay,